XCP-NG 8.2 ndiyo yekutanga LTS vhezheni iyo inouya nekuvandudzwa kwakawanda | Linux Vakapindwa muropa
XCP-NG 8.2 ndiyo yekutanga LTS vhezheni inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeprojekti XCP-NG 8.2 yakatoburitswa kareuye iyi vhezheni yeLTS iyo ichave iri kuwana rutsigiro uye kugadzirisa bug kune makore mashanu, saka ichatsigirwa kusvika 5.
Kune avo vasingazive nezveXCP-NG, vanofanirwa kuziva izvozvo chirongwa chirongwa chemahara uye chemahara chinotsiviwa neCitrix chikuva proprietary hypervisor (yaimbonzi XenServer) kuendesa nekutarisira mashandiro enzvimbo yezvivakwa, yakaitika.
XCP-NG inogadzirisazve mashandiro ayo Citrix yaakasiya yeiyo yemahara Citrix Hypervisor / Xen server kubvira vhezheni 7.3. Inotsigira kusimudzira kubva kuCitrix Hypervisor kuenda kuXCP-ng, inopa yakazara Xen Orchestra rutsigiro uye kugona kufambisa chaiwo michina kubva kuCitrix Hypervisor kuenda kuXCP-ng uye kumashure.
Chinhu chinonakidza nezve kushandisa XCP-NG ndechekuti Kurumidza kuendesa sevha uye yekushandira virtualization system nekupa nzira dzekutarisira pakati nepakati nhamba isingaverengeki yemaseva uye chaiwo michina
Pakati pezvikamu yehurongwa iko kugona kwekubatanidza maseva mazhinji muboka kunoratidzwa (sumbu), maturusi epamusoro ekuwanikwa, rutsigiro rwezvibodzwa, govana zviwanikwa uchishandisa XenMotion tekinoroji
Pamusoro pazvo, inotsigira mhenyu kutama kwemuchina michina pakati pemasumbu emasumbu uye pakati pemasumbu akasiyana / akasarudzika (ayo asina chengetedzo yakajairika), pamwe nekutama mhenyu kweVM disks pakati pezvitoro. Ipuratifomu inogona kushanda nenhamba yakakura yekuchengetedza masystem uye inozivikanwa nekuvapo kweyakareruka uye intuitive interface yekumisikidza uye manejimendi.
1 Main nyowani maficha eXCP-ng 8.2
Main nyowani maficha eXCP-ng 8.2
XCP-ng 8.2 ndiyo yekutanga kutsigirwa kwenguva refu (LTS), iyo ichagadzirisa zvikwata zvakakomba, kugadzirisa kusagadzikana uye kugadzirisa mamwe madhiraivha auchazodzidzisa kwemakore mashanu, nepo edhisheni edhisheni ichizotsigirwa kwegore rimwe.
XCP-ng 8.2 mabhenefiti kubva kune refu-nguva yekutsigira kupihwa. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe mushure mekunge iyi vhezheni yasiya yakajairwa kuburitswa (patinosunungura XCP-ng 8.3), iyo LTS vhezheni icharamba ichibatsirwa kubva mukuvandudzwa uye neyedu nyanzvi yevatengi rutsigiro masevhisi ane zvibvumirano zvinoenderana.
Nekudaro, kuitira kuti iyo vhezheni igadzikane sezvinobvira, zvigadziriso zvichaganhurirwa ku:
Kugadzirisa kwakakosha kwe bug
Vamwe vatyairi vanogadziridza
Iyo itsva vhezheni nkana kungodzokorora mashandiro eCitrix Hypervisor 8.2, asi iweIyo zvakare inopa dzinoverengeka kugadzirisa, sewe UEFI rutsigiro rwakagadzirwazve zvachose.
Iyo purojekiti ikozvino shandisa kodhi yemuno kutanga vaenzi muEFI modhi, kubvisa kutsamira paCitrix kodhi uye kudzikisira njodzi yekugona kubviswa kweCitrix. Citrix akange amboedza kuvhara kodhi inoenderana neEFI, asi akazodzosera danho iri.
Imwe shanduko yakakosha yeshanduro iyi nyowani ndeyekuti kufambiswa kweruzivo rwekushambadzira kwaive kushandiswa kushandisa OpenFlow protocol kune Openflow controller inochengetedzwa kuburikidza neXen Orchestra.
Wakawedzera rutsigiro rwekuyedza kuronga basa zvine chekuita neCPU cores. Iyo programmer ikozvino inogona kurongedza chaiyo vCPUs yeakananga maVM uye nekumhanyisa iwo iwo chaiwo epanyama CPU musimboti, nekudaro kubvisa mukana wekurutivi rwechiteshi kurwisa.
Kune rimwe divi, a rutsigiro rwekuedza rwevatongi vakasiyana vekuchengetedza, iyo inokutendera iwe kuti ugadzire storages zvinoenderana neinotevera Gluster, ZFS, XFS, uye CephFS faira masisitimu. Tsigiro yeaya mafaera masisitimu XCP-ng 8.2 inobata ivo natively (Kunyangwe panguva ino, sezvatotaurwa, zviri kuyedza).
Yakawedzerwa rutsigiro rwemhuri nyowani yeIntel CPU: Icelake neCometlake.
Pamusoro pekuwedzera kwemo module yeZFS, yakagadziridzwa kuita vhezheni 0.8.5 uye kumisikidzwa kweiyo zstd algorithm yakagadziridzwa kuita vhezheni 1.4.5.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve shanduko dzakaunzwa mune iyi nyowani vhezheni, unogona kutarisa shanduko zvakadzama Mune inotevera chinongedzo.
Kune avo vanofarira kuyedza iyi vhezheni itsva, unogona kuwana iyo 580 MB yekumisikidza mufananidzo kurodha pasi Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » XCP-NG 8.2 ndiyo yekutanga LTS vhezheni inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana
Side View: Firefox yekuwedzera iyo inotibvumidza isu kupatsanura iyo skrini muhwindo rimwe chete
Vivaldi inogadzirira tsamba, karenda uye nhepfenyuro yekuverenga nhau